“Samia miaiky fa ny ady gasy no nahavonjy vahoaka fa tsy fandaminana sy tetikady politika izany. Tsy araka eto amintsika ireo fepetra ara-pahasalamana ataon'ny firenen-dehibe any ivelany ireny nefa hitantsika fa mikararana ny isan'ny maty ary mitombo isanandro ny marary any Etazonia, Frantsa, Italia ary Espagne.”. Nilaza izy fa tsy manana ny ho enti-manana tahaka ny firenen-kafa ny Fitondrana eto amintsika ary tsisy fampitahana azo atao. Isika koa tsy afaka hiteny fa manana stratejia henjana noho ny hafa nefa sady tsisy maty eto amintsika no tsy dia mihanaka ny aretina. Arak any nambarany hatrany dia tena matehi-dera ny mpitsabo eto amintsika satria na tsy ampy fitaovana na koa ara-bola aza dia ny toe-tsaina feno fahavononana maha Mpitsabo azy ireo aty amin'ny tany mahantra no nentin'izy ireo niatrika ny ady ary nahomby. Farany dia namafisiny fa ny ady gasy no nanavotra ny vahoaka.Ny isan-tokatrano rehetra dia samy nampiasa ireo fanafody nenti-paharazana ary ny vahoaka samy vahoaka no nifampianatra sy nifampita vaovao sady efa mahazatra vahoaka koa ny manao adigasy ka miala maina ity areti-mandoza ity eto amin'ity Nosy malalantsika feno hasina ity. “Hampisongadina an'i Madagasikara eran-tany ity ady gasy ity ary hampidi-bola izay tratra saingy aoka mba ho fananan'ny firenena Malagasy izay orinasa hanodina io ady gasy io fa tsy ifandroritan'ny mpangalatra zatra mpanao ampihimamba mpandroba firenena indray” hoy hatrany ny fanazavany.